Beesha caalamka oo soo dhowaysay doorashadii Axmed Madoobe – Radio Daljir
Agoosto 18, 2015 8:36 b 0
Qaramada Midoobay, AMISOM, IGAD, Midowga Yurub, iyo Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska (UK) ayaa soo dhoweeyay doorashadii madaxtinnimada maamulka Jubba ee 15-kii Agoosto ka dhacday Kismaayo, taas oo Axmed Madoobe uu ku guulaystay.
“Waxaan Sheekh Axmed Maxamed Islaam “Madoobe” ugu hambalyeynaynaa doorashadii Golaha Baarlamaanka ee Jubba ugu doortay inuu noqdo Madaxweynaha Maamulka Ku-meel-gaarka ee Jubba,” beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saartay ku tiri.
Beesha caalamka ayaa bogaadisay sida Axmed Madoobe ay uga go’antahay inuu si dhab ah ula shaqeeyo guddigii uu dhisay raysul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali, si xal loogu helo qaab dhismeedka Golaha Baarlamaanka Maamulka Ku-Meel-gaarka ee Jubba.
Waxay ku dhiirrigeliyeen Axmed Madoobe iyo maamulkiisa inay sida ugu dhakhsiyaha badan u xalliyaan arrintan iyadoo loo marayo qaab loo wada dhan yahay.
Saaxiibbada caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay taageerada uu Axmed Madoobe u muujiyay natiijadii ka soo baxday (shirkii) Madasha Wadatashiga Heerka Sare iyo weliba Qaraarka Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ee tirsigiisu yahay 2232 (2015).
Waxay ku dhiirrigeliyeen madaxweynaha Jubba, Maamulka KMG ah ee Jubba iyo Dowladda Federaalka inay si dhow ula shaqeeyaan Soomaalida inteeda kale ee ay arrintu khusayso si wadahadal wax dhisaya looga yeesho hannaanka maamul dhisidda iyo hanaanka doorasho ee 2016.
Waxay ku ammaaneen maamulka Jubba sida ay uga go’an tahay inuu si dhow ula shaqeeyo, iskaashina la yeeshaan ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM si loo xorreeyo deegaannnada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab loona baahiyo Maamulka Ku-Meelgaarka ah ee Jubba.
Waxay ballanqaadeen inay sii wadi doonaan dadaalka loogu jiro dhaqaale ururinta iyadoo loo marayo nidaamyada hadda jira si loo taageero adeegyada asaasiga ah oo la gaarsiiyo dadka ku nool gobolladan lana dhiso tayada Maamulka Ku-Meelgaarka ah ee Jubba.”
Madaxwayne Gaas oo maantay xariga ka jaray Saldhiga Booliska Gaalkacyo oo dayac-tir dhisme lagu sameeyay